Wararka Maanta: Isniin, Jun 25, 2012-Ciidamada AMISOM ee ku sugan Baydhabo oo lagu wareejinayo Ammaanka garoonka Diyaaradaha Degmadaas
Magaalada Baydhabo oo bishii Feberaayo ee sannadkan ay ciidamada DKMG ah iyo kuwa Itoobiya ka qabsadeen Al-shabaab ayaa bishii Abriil ee sannadkan waxaa la geeyay 100-askari oo ka socda dalalka Uganda iyo Burundi, kuwaasoo hordhac u ah 2,500-askari oo la geynayo gobollada Bay iyo Bakool.
"Baydhabo waxaa soo gaaray saraakiil ka socda AMISOM oo u golgol-xaaraya sidii ammaanka garoonka Baydhabo loogu wareejin lahaa ciidamadooda," ayuu yiri mid ka mid ah waxgaradka ku sugan degmada Baydhabo.
Garoonka diyaaradaha ee Baydhabo ayaa waxaa gacanta ku haya ciidamada dalka Itoobiya, waxaana garoonkaas ka dagay diyaarado fara badan tan iyo markii laga qabsaday degmadaas xoogagga Al-shabaab.
Ciidamada Itoobiya ee ku sugan Baydhabo ayaa la sheegay inay ku wajahan yihiin deegaanno ka tirsan gobollada Jubbooyinka oo Al-shabaab ay awood badan ku leedahay, inkastoo aan la faahfaahin goobaha ay tagayso.
Magaalada Baydhabo oo ah xarunta gobolka Bay ayaa waxay ka mid tahay dhowr degmo oo ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya kaga sugan yihiin gobolkaas oo awood badan ay ku ahaayeen xoogagga Al-shabaab oo dhawaan ku biiray Al-Qaacida.